Chichemo pamusoro paAvast nekupomerwa kusora vashandisi vayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Avast Yakachengeteka Bhurawuza bhurawuza inotumira data nezve vashandisi 'nhoroondo yekutsvaga.
Chichemo inopesana naAvast inova nechokwadi chekuti iyo yakasimba antivirus zvigadzirwa vakaongorora vanopfuura mamirioni mazana mana evashandisi. Chishandiso cheusori ndeche iyo Avast Online Security yekuwedzera kuti zvigadzirwa izvi zvinokurudzira kuiswa mubrowser yemushandisi kuti uwane kuchengetedzwa kwakanyanya.
Izvi zvinogona kudzivirirwa kana iwe ukashandisa Firefox, Chrome, Edge kana imwe browser. Asi Avast has bhurawuza rako inotarisa pane zvakavanzika.
Muchiitiko cheiyo Avast Yakachengeteka Browser chigadzirwa ine Avast Online Security yakaiswa nekusarudzika. Yakavanzwa mune runyorwa rwekuwedzera uye haigone kubviswa nenzira dzese. Kushanda kwayo kunoonekwa sekunge chikamu chemubrowser. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kana ukashandisa AVG Yakachengeteka Bhurawuza iyo zvino yavawo naAvast
1 Tsananguro yekunyunyuta pamusoro paAvast
2 Dzimwe nzira
Tsananguro yekunyunyuta pamusoro paAvast
Kana Avast Online Security yekuwedzera iri kushanda, inokumbira ruzivo nezve mawebhusaiti akashanyirwa nemushandisi kune Avast server. Mukuita, inotumira data inoita kuti zvikwanise kugadzirisa nhoroondo yako yese uye hwakawanda hwekuita kwako kubhurawuza. Huwandu hwe data rinotumirwa hunopfuura zvinopfuura izvo kuti kuwedzerwa kushande, kunyanya kana ichienzaniswa nemhinduro dzinokwikwidza senge Google Safe Browsing.
Saizvozvo, Avast Yakavanzika Gwara inoshuma maitiro aya kuve nechokwadi chekuti unochengeta iyo data zvisingazivikanwe pasina kutaura kuti yakareba sei.
Kutapurirana kwedata kunogona kuverengerwa kubvira nguva yega yega mushandisi paanovhura tebhu, bhurawuza rinobatana kutanga kune ino saiti
Mubvunzo kwete chete kutumirwa kana peji rawanikwa, zvinoitika pese paunoshandura pakati pematebhu. Uye, kana iwe ukavhura injini yekutsvaga, zvese zvinongedzo zvinowanikwa papeji rino zvinotumirwa, kungave mhedzisiro yekutsvaga kana chinongedzo chemukati kubva kunjini yekutsvaga.
Semazuva ese, yakavhurwa sosi inotipa zvakanakisa dzimwe nzira Kuchengetedza zvakavanzika zvedu, ini handizive chero mhinduro inosanganisa antivirus uye browser, saka ini ndichakurukura dzimwe nzira dzakasiyana.
Iyi software inoshanda neWindows neLinux. Sezvo admin admin iri peji rewebhu, rinogona kudzorwa kure. Zvimwe zvehunhu hwayo ndeizvi:
Chinyakare malware kuona.
ClamAV dhatabhesi rutsigiro kuti iwe ugone kuongorora yako email kune mavhairasi.
Tsigiro yekushandisa iyo YARA mutemo kana uchiongorora chero dhairekitori kana faira inofungidzirwa kuve yakaipa.
Heuristic detection modules kutarisa mabhinari uye zvinyorwa zvePDF kune hutachiona hutsva husingazivikanwe kusvika zvino
Kugona kuisa nzvimbo dzakasiyana.
Uku ndiko kujairana kwekare kwatinogona kuwana mumadura ekuparadzira akasiyana siyana. Zvakare zviripo yeWindows, Mac uye xBSD.
Yakawanda-yakamisikidzwa scanning daemon uye yekuraira mutsara zvishandiso zve-zvinoda faira kutenderera.
Otomatiki kugadzirisa yeiyo malware dhatabhesi.
Tsigiro yemhando dzakasiyana dzefaira.
Kugona kudzikisira mafaera.
Kuongorora mapeji ewebhu uye email.
Inogona kushandiswa kubva kune iyo terminal.
Ini ndinotanga nekujekesa kuti handishandisi Chromium, saka ini handikwanise kutaura kana ichifanira kunge iri pane irwo runyorwa. fomu. Asi, chakakomba zvishoma, usaratidza Google Chrome.
Kunyangwe paine kubvumidzwa kururamisa kwezvematongerwo enyika izvo zvakatungamira Mozilla Foundation kusiya hunhu nekuda kwe "kuiswa," bhurawuza iri kuramba ichivandudza. Vose zvavo dzakataurwa panguva yakakodzera nevamwe vangu.
Bhurawuza racho rinewo dhatabhesi rayo remasaiti ane ngozi anotiyambira patinoedza kuisa chero awo.
Iri bhurawuza Iyo inovandudzwa neaimbove mukuru weMozilla Labs. Inoti inokurumidza kasere kupfuura kukwikwidza (kusanganisira Google Chrome) uye ichivharira kurodha pasi kwezvisingadiwe zvemukati zvinobvumidza kuteedzera. Inosanganisira pre-yakaiswa ad blocker uye maviri akavanzika ekuvhura modes, imwe yacho ichishandisa Tor network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kunyunyuta pamusoro peAvast kunoti zvigadzirwa zvaro zvinosora mamirioni evashandisi.
Yakanaka posvo, yakajeka.
JOSE 'LUIS MARTINS MIRANDA akadaro
IZVI ZVAKANAKA MAFIA NDINODA KUZVIBVISIRA PAMUSORO PEKOMITI YANGU UYE HAZVIITESI CHINONYANYA KANA NDISINGAWANZE KUTI VABVISE NDIRI KUENDA KUSVIRA PAMUSORO PANDISADA KWAVO PAMAKOMPURE YANGU I KUNGODA KUVABVISIRA HANDIDI KUVADA, NDINOKOSHA NDITEGADZE.
Pindura kuna JOSE 'LUIS MARTINS MIRANDA
Avast mutsotsi akazara, anopinda mukombuta yangu uye haanditendere kushanda, ibenzi, haazive njodzi, ndiri kutora kosi uye anondiudza kuti kune avo vari kunditevera pamusoro pazvo ndinofanira kumirira awa kuti anditendere ndiite chimwe chinhu. Ndiani muridzi wekambani iyi isina hunhu, ini handina kumboona imwe anti-virus inozvibata chaizvo kunge hutachiona. Ruramisiro inofanirwa kutora matanho kuvanhu veiyi ilk
Pindura kuna mmmmmmmmm
Iwe unofanirwa kutsvaga sarudzo yeApplications pakutanga kwegadziriro uye kudzima Avast. Mushure maizvozvo haufanire kunge uine dambudziko kuidzima
patricia aispuro akadaro
mwana wangu aivhura game inonzi roblox pa pc and haana kurangarira kuti akaisa something ne avast and avast opened instead of google akauya achichema kwandiri ndokundiudza.
Pindura kuna Patricia Aispuro